Switzerland oo Afti u qaadeysa Mamnuucista Indho Shareerka Goobaha Dadweynaha Somali - Wararka Somalida, Caalamka
HomeWararka CaalamkaSwitzerland oo Afti u qaadeysa Mamnuucista Indho Shareerka Goobaha Dadweynaha
March 6, 2021 Wararka Caalamka, Wararka Maanta Somaliska 0
Codbixiyeyaasha Switzerland waxay aadi doonaan berri, oo Axad, goobaha codbixinta si ay uga codeeyaan afti dadweyne oo ku saabsan “mamnuucista indhashareerka iyo niqaabka” goobaha dadweynaha.
Aftida waxaa taageeray xisbiga garabka midig ee Swiss People Party, oo horey ugu guuleystey u ololeynta sharci mamnuucaya dhismaha minaarada masaajidada ay aqbashay Switzerland sanadkii 2009.
Tirakoobka rasmiga ah wuxuu muujinayaa in muslimiintu ay matalaan kaliya boqolkiiba shan dadka reer Switzerland oo gaaraya 8.6 milyan.
“Waa dhaqankeena Switzerland inaan wajiga la qarin, ” ayuu yiri Walter Wobmann, oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka Xisbiga Dadka Switzerland, ahna gudoomiyaha guddiga aftida . Tani waxay calaamad u tahay xorriyadeenna aasaasiga ah. ”
Aragtida ra’yi dhiibashada waxay muujineysaa in inta badan Swiss-ka ay taageeri doonaan mamnuucista oo sharci laga dhigo .